↑ Den 1. Golfkrig။ Forsvaret.dk (24 September 2010)။ 12 January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ General Khaled was Co-Commander, with U.S. General Norman Schwarzkopf, of the allied coalition that liberated Kuwait www.thefreelibrary.com Archived 30 April 2011 at the Wayback Machine.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Persian Gulf War - MSN Encarta။ 1 November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Use of Terror during Iraq’s invasion of Kuwait။ The Jewish Agency for Israel။ 24 January 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-06-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kuwait: missing people:astep in the right direction။ Red Cross။7March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပင်လယ်ကွေ့_စစ်ပွဲ&oldid=673640" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။